OPP inoti cyberbullying iri kuwedzera muzvikoro zveKenora - BullyingCanada
OPP inoti cyberbullying iri kuwedzera muzvikoro zveKenora
/ OPP inoti cyberbullying iri kuwedzera muzvikoro zveKenora
MuNhau March 20, 2022
Cyberbullying pakati pevadzidzi iri kuwedzera muKenora maererano neOntario Provincial Police.
Tsananguro iyoyo BullyingCanada Kushandisa dandemutande kana kutumira mameseji kutyisidzira, kuisa pasi, kuparadzira makuhwa, kana kuseka mumwe munhu.
OPP Provincial Constable, Jason Canfield anofunga kuti denda reCCIDID-19 rave neruwoko mukuwedzera kwekudheerera kwaakaona.
"Nayo [COVID-19] ichipinda munzvimbo uye vana vekuvhara vakamanikidzwa kupedza nguva yakawanda kupfuura nakare kose pamidziyo yavo," akadaro Canfield. “Vana vari kupedza nguva yakawanda pazviri, pamwe vachifinhwa. Kana paine nyaya dzaiitika vasati vaenda kuchikoro vana vasingadanane zviri kuenderera mberi.”
Canfield akaona kuti kudheerera kwaakaona hakusi kupera pabhero rekupedzisira rechikoro.
“Zvizhinji zveizvi zvinoitika pakati pehusiku saka apo vana vazhinji vanofanira kunge vakarara mushure me11, pakati pehusiku mamwe emashoko aya ari kutumirwa. Dai vana vasina nharembozha hapana chimwe cheizvi chingadai chiri kuitika.”
Canfield inoda kuyambira vabereki kuti cyberbullying iri/ inogona kunge iri kuitika uye iri kunyanya kuitika pamasocial media mapuratifomu akadai seSnapchat, Tik Tok, uye Instagram. Anotenda kuti mapuratifomu aya ndiwo mudzi wedambudziko.
BullyingCanada inoti muCanada, mudzidzi mumwe chete pavatatu vari kuyaruka akashuma kuti anodheererwa.